Ungazithola kanjani zonke izithombe-skrini ku-Mac yethu kusuka ku-Finder | Ngivela kwa-mac
Uma imvamisa sizinikele ekubhaleni futhi sinesidingo sokuthatha izithombe-skrini, kungenzeka ukuthi uma singavamisile ukuqaphela, iMac yethu izogcina inenani elikhulu lokuthwebula okusatshalaliswe yi-Mac yethu. Njengomthetho ojwayelekile, ngaphandle kokuthi shintsha, zonke izithombe-skrini esizithathayo zigcinwa ngokuzenzekelayo kudeskithophu yekhompyutha yethu.
Kamuva singazigcina noma sizisuse uma zingasazodingeka ngokuzayo. Kepha uma uzigcina ukuze ukwazi ukuzisebenzisa kabusha, kungaba nzima ukuzithola uma singakaze siziqambe kabusha phambilini. Ngenhlanhla ngokusebenzisa iSithole Singasesha zonke izithombe-skrini ezigcinwe kwikhompyutha yethu.
Yize kuliqiniso ukuthi kunezindlela ezahlukahlukene zokuthola zonke izithombe-skrini, noma ngabe siziqambe kabusha noma cha, kule ndatshana ngizogxila kuphela ekuboniseni indlela yokukwazi ukwenza usesho ngendlela elula: nge-Finder.
Okokuqala kufanele uvule iSitholi bese uya ebhokisini lokusesha. Singaya futhi ngqo kudeskithophu bese sicindezela inhlanganisela yokhiye ye-Command + F.
Okulandelayo sikhetha iMac, ukuze iqhubeke nokusesha kuyo yonke iMac futhi ngokuhamba kwesikhathi ebhokisini lokusesha sibhale i- "kMDItemIsScreenCapture: 1" ngaphandle kwezingcaphuno ukuze i-Finder isibonise ngokuzenzakalela zonke izithombe-skrini ezigcinwe kwi-Mac yethu.
Igama okugcinwa ngalo kugcinwe ngeSpanishi yi- «Screenshot». Lo myalo awuseshi ngegama lefayela, kodwa ngendlela esetshenzisiwe ukukhiqiza.
Uma sifuna ukususa konke noma ingxenye yezithombe-skrini uMtholi asikhombisa zona ngemuva kokwenza usesho, kufanele sizikhethe bese sizithumela kumgqomo wokuphinda usebenzise kabusha.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungazithola kanjani zonke izithombe-skrini ku-Mac yethu kusuka ku-Finder
Kusuka ezinsukwini ezi-1 kuye kwezi-3. Izikhathi zokuthumela zama-AirPod ziyehla futhi